I-Outcast 2 - Isiqalo Esisha Siyeza Ngo-2022! - Ukudlala
I-Outcast 2 - Isiqalo Esisha Siyeza Ngo-2022!
Iyini i-Outcast 2 - Isiqalo Esisha Mayelana?
Usuku Lokukhishwa Futhi Yiziphi Izingxenyekazi Ezizosekela Umdlalo?
Ulwazi olusha nge-Outcast 2 selukhishiwe, futhi lujabulisa kakhulu! Ngonyaka we-10 wokugubha iminyaka engu-10 ye-THQ Nordic Showcase, unjiniyela we-Outcast 2: Isiqalo Esisha uveze ubukhona bomdlalo ekusakazeni kwewebhu bukhoma ngesikhathi sokumenyezelwa komdlalo kanjiniyela. Yize kuthathe isikhathi eside ukuthi leli culo elilandelanayo likhishwe, kodwa nakanjani lizovusa isasasa kubalandeli.
I-Appeal Studios, esanda kutholwa yi-THQ Nordic, iphethe ukuthuthukiswa komdlalo omusha, i-Outcast 2.
Nakuba i-Appeal Studios yayike yasho phambilini ukuthi kungenzeka kube khona i-Outcast elandelanayo, manje isiqinisekisiwe. Ikhishwe ekuqaleni ngo-1999, i-sci-fi prequel Outcast kwaba ukufakwa komhlaba ovulekile okuwine umklomelo okuphuma kuSikhalazo sikanjiniyela esithole ukutuswa okubalulekile.
Ithathwa kabanzi njengomunye wemidlalo eyasungula uhlobo lomhlaba ovulekile, futhi yathola ukutuswa okusabalele ngesikhathi ikhululwa.
Ngo-1999, i-GameSpot yawuqamba ngokuthi i-Adventure Game of the Year, futhi yakhululwa ngo-2000. I-spin-offs kanye nokulungiswa kabusha kwegeyimu yasekuqaleni kwakhululwa ngemva kokukhululwa kwayo.
I-Outcast 2 izokwenzeka emhlabeni oqanjiwe obizwa nge-Adelpha, lapho abadlali bezodlala indima ye-Cutter Slade, futhi izokwenzeka eminyakeni engamashumi amabili ngemuva kwezehlakalo zomdlalo wokuqala.
Ukuhlola iplanethi nokuxhumana nabahlali bayo kuzodingeka kubadlali. Ukunyakaza nokulwa kuthuthukisiwe, ngokusho kwe-THQ Nordic, futhi abadlali bazokwazi ukusebenzisa amandla e-Talan, amakhono afana nomlingo, kanye ne-jetpack entsha ezothuthukisa ukuhamba.
I-Unreal Engine 4-powered sequel ibilokhu ithuthukiswa kusukela ngasekupheleni kuka-2018 futhi izokhishwa ngo-2019. Iphinde yabizwa ngokuthi iseduze ne-Alpha kweminye imibuthano.
I-THQ Nordic ayizange icacise idethi eqondile yokukhishwa, kodwa uma kubhekwa ukuthi igeyimu isivele isezingeni le-alpha, singalindela ukuthi ikhishwe cishe ngo-2022. Umdlalo cishe uzokhishwa nge-PC kanye nezinkundla zesizukulwane esilandelayo njenge i-PlayStation 5 ne-Xbox Series X/S, phakathi kokunye. Bheka i-trailer yesimemezelo esingezansi.
I-Cutter Slade, i-Navy SEAL evele emdlalweni wokuqala, izobuya ku-Outcast 2 - Isiqalo Esisha njengomlingisi odlalekayo. Njengoba kushiwo ekhasini le-Steam lomdlalo, uMsiki uvuswe ama-Yods onamandla onke, futhi uzonikezwa umsebenzi wokusindisa iplanethi i-Adelpha emabuthweni amarobhothi ahlaselayo. Esebenzisa i-jetpack yakhe, u-Cutter uzokwazi ukugxuma, i-air-dash, i-glide, futhi anqamule ngokushesha indawo ebanzi ye-Outcast 2.
I-Outcast 2 - I-New Beginning, ethuthukiswe yi-THQ Nordic kanye ne-Appeal Studios, ichazwa njengomdlalo wokuzidela womhlaba ovulekile onenganekwane engaqondile lapho izenzo nezinqumo zabadlali zizothinta isiphetho sokulandisa.
Yilokho Konke Mayelana Ne-Outcast 2 - Isiqalo Esisha. Hlala ubukele ukuthola izibuyekezo eziningi futhi ubeke uphawu kusayithi lethu ukuze uthole izindaba ezengeziwe. Ngiyabonga Ngokufunda!
Ukusebenza: I-Harsh Doorstop - Iza Nini?
I-Mcgraw Ave Isizini 2: Izinto Okumele Uzazi!
‘Umzukulu Wendoda Ehlakaniphile’ Isizini 2 Ingabe Ikhanseliwe? Bheka Lapha!
I-PA Attorney General Suing Comic Con Umhleli Wokubuyiselwa Kwamathikithi